Resaky ny mpitsimpona akotry : fivarotan-tany sy fanadinoana tanindrazana | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : fivarotan-tany sy fanadinoana tanindrazana
Maizimaizina ny fomba nandafosana tanim-panjakana indraidray. Tsy fantatra intsony ny lohany sy vodiny mikasika ny lalana nahazoana vahiny ireo tany fantatra amin’ny anarana hoe Tanikatsaka etsy Bemasoandro amin’iny lalan’Itaosy iny. Ny nahatonga ny anarana Tanikatsaka dia nisy iny ampahany andrefana iny izay fambolen’ny Haras katsaka ho sakafon’ireo biby ompiany.
Raha tsiahivina vetivety moa ny mikasika ny tantaran’ny Haras teo dia tamin’ny andron’ny fanjanahana no nanangana azy, rehefa nitombo tsikelikely moa ny mponin’ny Renivohitra dia anisan’ny faritra nandroso haingana ho fonenana iny Itaosy iny, vita teo ny naha ambanivohitra azy, nihemotra ny fambolena tsy nanana laharam-pahamehana intsony ny Haras. Tany amin’ny faraparan’ny laharan’ny taona 90 tany dia nanjavozavo ny famaranana ny fisiany.
Ny minisiteran’ny Fambolena moa no fahefana mpiahy, fa ny Faritanin’Antananarivo kosa no tompon’ny tany. Teo no nanomboka ny pasy tranon-kala. Any aoriana any mbola hisy angamba mpanadihady hanao fikarohana ahafantaran’ny be sy ny maro ny tena lalana nampivadika io tany io ho fananana ara-dalànan’ireo tompony ankehitriny. Mandrak’izao dia mbola miseho ihany ny disadisa, toa fananana mihitatra no fijery azy. Lasa ireo tompony indray no mampifilafila manao omeko tsy omeko.
Nijoro indray ny fefy famaritana ny taniny. Asa na nanao foana koa ny fanjakana izay nanitatra ny arabe amin’iny sisin’iny ho fijanonan’ny taxi-be, fepetra mba tsy hibahanany tafahoatra hampikatso ny fifamoivoizana rehefa mampidina na mandray mpandeha izy ireo. Maro ireo taxi-be amin’iny faritra iny, maro koa ny fiara, toy ny lalana rehetra manodidina ny Renivohitra dia mandady ny fifamoivoizana amin’ny ora famonjena asa toy izay koa rehefa tonga ny fotoana fodiana. Ny filàna vanin’ireo miseho ho tompon’ity tany ity dia manampy trotraka ny fahasahiranan’ny vahoaka tompon-tany. Any ivelany any mba hampisosa ny fifamoivoizana dia misy izany fanalana olona amin’ny taniny (expropriation) eto ny olona manokana no manilikilika ny fanjakana izay nampiasa tsy ara-dalàna ampahan-tany ho an’ny tombontsoan’ny maro. Raha manadino ny adidy amin’ny vahoaka, manadino ny fitiavan-tanindrazana. Varotra re io ê !